साइबर सुरक्षाको दृष्टिमा हेर्दा नेपाल उच्च जोखिममा – डा. रामहरि सुबेदी - Enepalese.com
साइबर सुरक्षाको दृष्टिमा हेर्दा नेपाल उच्च जोखिममा – डा. रामहरि सुबेदी
इनेप्लिज २०७२ साउन २९ गते २२:३६ मा प्रकाशित
नेपालबाट अमेरिका कोही किन आउँछ ? उत्तर सजिलो छ—कि पढ्न कि पैसा कमाउन । पढ्न भनेर आउनेहरु पनि थोरैले मात्रै पढाइलाई निरन्तरता दिन्छन् । धेरैजसो भने पैसा कमाउने ध्याउन्नमा लाग्छन् । चितवनको गुञ्जनगरबाट सपनाको ढाकर बोकेर अमेरिका आउँदा रामहरि सुवेदीसँग दुइटै सपना थिए । उनी पढ्न पनि चाहन्थे र उन्नत जीवनस्तर जिउन पैसा कमाउने स्वभाविक इच्छा पनि थियो । सुवेदीले ती दुवै सपनालाई साकार पनि गरेका छन् । एउटा सुखी र सन्तोषी जिन्दगी बाँच्न मिल्ने हैसियत स्थापित गरिसकेका छन् । त्योभन्दा गर्विलो कुरा उनको पढाइले एउटा शिखर चुमेको छ । हालैमात्रै उनले साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धमा नर्थ सेन्ट्रल विश्वविद्यालय एरिजोनाबाट विद्यावारिधि गरेका छन् ।
——डिसीनेपाल डट कम कुन उद्देश्यले सुरु गर्नुभएको थियो ?
——ऊ बेला अडियन्स पाइन्थे त ?
——अहिले डिसीनेपाल डट कमको पोजिसन कस्तो छ ?
——प्रसंग तपाईंको विद्यावारिधि शोधतिर मोडौं । तपाईंको पिएचडी रिसर्चले नेपालको साइबर सुरक्षा कस्तो देखायो ? नेपालमा साइबर सेक्युरिटी कस्तो पाउनुभयो ?
——तपाईंले अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासामा पनि ७ वर्ष आवद्ध रहनुभयो र भर्खरै छाड्नुभयो । के काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँ ?
—— नासामा बसेर सिकेको सबैभन्दा ठूलो ज्ञान के हो ?
—— साइबर सेक्युरिटीमा तपाईंले गरेको विद्यावारिधि अब केमा उपयोग गर्ने विचार छ ?